Senator Falhada Imaan oo baaq muhiim ah u dirtay shacabka ku d... | Universal Somali TV
Shacabka ku dhaqan deegaanada dhaca gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa loogu baaqay in ay ka fogaadaan wax waliba oo keeni kara faafitaanka cudurka dhibaatad ku haya dunida Corona.
Marwada sida magacaabista ah uga tirsan golaha Senat-ka Kenya ee una matasha ismaamulka Garissa marwo Falhada Deekoow Imaan oo la hadashay Universal Tv ayaa ku boorisay shacabka in ay qaataan agabka wajiga lagu xirto ee loo yaqaan Face Mask.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayaa dhanka kale waxay ka codsatay dhalinyarada gaar ahaan kuwa aan shaqeyn in guryahooda ay iska joogaan iyada oo la raacayo qaacidada dunida caanka ka noqotay ee loo yaqaan Stay Home.
Dhanka kale waxay intaa ku dartay in ay muhiim tahay nadaafada gaar ahaan in la gacmo dhaqdo lagana fogaado isku dhawaanshaha Bulshada.
Gabadhaan ka tirsan golaha aqalka sare ee Kenya ayaa rajo ka muujisay in bisha barakeysan ee Ramadaan fadligeedu uu cudurkaan ilaah umada ka dulqaado si waajibaadka rabi ay Muslimiinta ugu gutaan si Wanaagsan.
Baaqaan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay muwaadinkii labaad oo Soomaali ah oo cudurkaan u dhintay lagu aasay qabuuraha Langata ee magaalada Nairobi.
Kan-xigaSirdoonka Soomaaliya oo lagu eedeeyay...
Kan-horeDowlada UK oo kordhisay xayiraada saa...
54,164,849 unique visits